Maalgashiga 100 bilyan ee mega maalgashiga Xawaaraha Hillaac | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankara100 Milyan dollar mega maalgelinta Xawaaraha iftiiminta
100 Milyan dollar mega maalgelinta Xawaaraha iftiiminta
24 / 05 / 2016 06 Ankara, 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, hyperlinks, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
Xawaaladda iftiiminta maalgashiga maalgashiga 100 bilyan oo doolar: 65 by Madaxweynaha Erdogan. Binali Yildirim, oo loo xilsaaray inuu aasaaso xukuumadda, wuxuu leeyahay qorshe ballaadhan. Turkey waa 2023 100 billion dollars in maalgashiga guud ahaan aad iyo aad gool ay muddo hillaac ayaa la filayaa in la hirgaliyo dardargelinta
Dhamaadka wiigga ee Xisbiga AK 2. 65: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan Sh. Binali Yildirim, oo loo xilsaaray in uu aasaaso xukuumadda, ayaa filaya maalgalin balaayiin doolar ah. Muddadii Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta, 225 waxaa lagu saxiixay mashruuc weyn oo mashruuc ah. Turkey waxay gaadhi doonaan bartilmaameedka ah 2023 dhismi total Binali Yildirim ka badan mashruuc $ 100 billion ayaa la filayaa in ay helaan xawaaraha lala dawladda cusub. Mashruuca Xarunta Dhaqaalaha ee Istanbul (IFC), Akkuyu Nukliyeerka Nukliyeerka, Mashruuca TANAP, Tareenka Xawaaraha Sare (YHT), Kanal Istanbul, 3. Bridge, 3. Airport Domestic Car, Rakaabka Binali Diyaaradaha Regional National sida mashruuca Rafaa in Turkey dunida qaadi doona inta lagu guda jiro shir lagu soo waramayaa qaadan doona xawaaraha hillaac.
2 MAGAALADA CUSUB IYO KANAL ISTANBUL
Channel Istanbul waxay ka shaqeysaa meesha maalgelinta 15 bilyan oo doolar lagu sameyn doono xawaare buuxa. Iyadoo qorshaha horumarinta, geeddi-socodku wuxuu helayaa xawaare. 250 bin + 250 kun qof ama 300 bin + 200 kun ayaa la dhigayaa labada dhinac ee kanaalka magaalada. In kasta oo la xisaabiyo in qiimaha Kanal Istanbul uu gaari doono bilyan doollar oo doolar oo leh mashaariic isku dhafan, waxaa la sheegi doonaa in wadarta 50 kun qof lagu abuuri doono geedi socodka dhismaha.
FEBRUARY FASALKA MAALINTA 2018
2018 ee 20, wajiga koowaad ee kaas oo adeegi doona bisha Febraayo, ayaa la dhameeyay. Marka la dhammeeyo mashruuca, mid ka mid ah garoomada caalamiga ah ee ugu weyn ee leh buundada rakaabka ee 165 iyo dayuuradda 6 iyo mitirka rakaabka sannadka ee 150 oo leh dhismo gaar ah ayaa la shaacin doonaa. Qiimaha mashruuca waa XYXX bilyan oo euro.
AVRASYA MAGANGALINTA DHAMAADKA 2016
Mashruuca Eurasia Tunnel (Istanbul Strait Road Tube Crossing Project) wuxuu la xidhiidhaa dhammaadka. Mashruucan waxaa lagu dhammei doonaa qaybta labaad ee 2017, halka 8 la dhamaystiri doono mudo ah bilaha 47. Inkastoo wadarta miisaaniyadda ee mashruuca ay noqon doonto 1 Milyan Dollar, ayaa baabuurta la joojin doonaa.
NAFLEER TRAFFIC ACCELERATED
Waxa ay noqon doontaa ka leexinayn ee warshad Turkey ugu horeysay ee nuclear Akkuyu Nuclear Power Plant Project, Dhismayaasha Akkuyu nukliyeerka Marine Aasaaskii la dhigay. Wadahadalada geedi socodka warshad tamarta nukliyeerka lagu dhejiyo ee Sinop ayaa sii socota. Maaraynta tamarta ayaa hadda socota warshadda saddexaad. Kharashka saddexda korontada nukliyeerka ayaa ka badan doona $ 1 bilyan.
GACANTA GANAAXAYNTA LAMBARKA TANAP
Mashruuca 10 ee Doolarka TANAP, kaas oo gaasta Azeri gaari doona Yurub, ayaa si deg deg ah u socda. Socodka gaasta ugu horreysa waxaa la filayaa in uu bilaabmo 2018. Qiimaha mashruuca wuxuu ku helayaa 45 bilyan oo doolar dhammaan marxaladaha. Mashruucaan waxaa lagu fulin doonaa shaqaaleynta 20 kun qof oo ka socda tuulada 67 iyo 600.
XARUNTA MAS'UULKA LOOGU TALAGALAYO 20 DIYAAR
Shaqooyinka dhamaystirka Mashruuca Xarunta Dhaqaalaha ee Istanbul (IFC) ee 2017 ayaa sii socota. Marka la eego waxqabadka Mashruuca Xarunta Maaliyadda ee Istanbul, waxaa lagu qiyaasey in 150 uu awood u yeelan doono in uu abuuro 20 bilyan oo euros sanadkiiba iyada oo la siinayo shaqaale guud oo ah XNUMX kun qof. Waxay noqon doontaa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha caalamka ee Istanbul.
70 BARNAAMIJKA QARANKA MAGANGELYADA
Mid ka mid ah mashaariicda ka dhigi doonaa kaalin muhiim ah oo dhaqaalaha dalka Turkiga, diyaarad qaranka. Waxaa la qorsheeyay in lagu yareeyo soo dejinta diyaaradaha diyaaradaha ee qaranka, kaas oo ka shaqeeya xawaare buuxa. All qeybo ka mid ah dalka Turkiga ilaa sanadkii 2023 70 diyaarad rakaab gobolka qaranka looga golleeyahay in lagu soo saaro in ay degaanka.
MAGAALADA 15 TALAABADA SARE
Magaalooyinka sida Ankara, Konya iyo Istanbul ayaa lagu xirayaa line-yada Tikidhada Xawaaraha Socda (High Speed ​​Train (YHT) waxaana lagu xirayaa magaalooyinka sida Antalya, Izmir, Sivas iyo Kayseri. Daraasada TCDD iyo daraasadda mashruuca ayaa socota. Turkey ayaa qorshaynaysa in ay isticmaalaan ay tareenka-xawaaraha sare ee u gaarka ah ee 2018.
4 NEW PROTOTYPES CAR CAR
Nidaamka joogtada ah ee baabuurka gudaha, kaas oo sannado badan shaqeynayey, ayaa shaqaynayay. Cilmi-baarisyada lagu fuliyo isuduwidda Wasaaradda Sayniska, Warshadaha iyo Teknolojiyada ayaa la filayaa inay soo saaraan 'babayiğit'. 2016 30 40 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
TURKSAT-5A IYO TURKSAT-6A
TÜRKSAT-5A taariikhda dhammaystirka dayax-gacmeedka 2018. TIKKSAT-5A satellite satellite 25 waxaa loogu talagalay inay noqoto tabaruc gudaha ah. TÜRKSAT-6A Horumarinta Satellite iyo Mashruuca Wax-soo-saarka ayaa sii wadaya inay shaqeeyaan. Taariikhda la filayo in la dhameeyo waa 2019. TÜRKSAT A.Ş. Mashruuca satellite-ka ah ee Türksat-6A waxaa bilaabay shirkadda ujeedada horumarinta iyo soo saarida Satellite-ka Isgaarsiinta Degmadda. Türksat-6A Isgaarsiinta Degmadu waxay qorsheyneysaa in ay ka shaqeyso xuddunta 42 ° Bariga xuduudka X-Band ee BSS-Ku Rakabka.
Turkey 17 145 Year dhigayaa Billion Doolarka socda Investment Kaabayaasha
Lütfi Elvan: Waxaan $ 1 bilyan ku bixinnay 100 maalgashiyada wadooyinka
100 mashaariicda mashruuca mega ayaa wali sii socota
Cashuurta Sarrifka Dibadda: Sicirka Canshuuraha ee Isdhaafsiga Dibadda iyo Macaamilada Lacagta Dahabka laga bilaabo 2 illaa 1 Boqolkiiba…
Gaadiidka gaadiidka gaasta oo dhan: 10 bil kasta TL
1.7 ayaa bixin doonta shabakad tareen oo Itoobiya ah oo kaliya
Qaybta Lacagaha ayaa ku shaqeynaya 6 bilyan oo doolar oo ay ku maraan buundada, jidka wayn iyo metro!
5 habka cusub ee tareenada ee xadiidka 4 ee magaalada Istanbul
5 Milyan Dollar 4 Khadka Nidaamka Tareenka Cusub ee Istanbul
Qaybta Saadka Qiimeeyntu waxay gaadhi doontaa 2023 Milyan Dollar oo 200 ah
Hindiya 15 waxay qaadaysaa tareenka xawaaraha sare ah ee bilyan doolar
Hantida sanadlaha ah ee maraakiibtu waxay gaareen 2,5 bilyan doolar
Qaybta Saadka ayaa gaari doonta 150 bilyan doolar
Mashruuca Xarunta Maaliyadda ee Istanbul
Ankara-Istanbul Tareenka Xawaaraha Sare
Mashruuca Tunnel Tunniga
Diyaarad Diyaaradeed ee Qaranka ee Qaranka
Xirfadaha Tareenka Xawaaraha Sare
Geedi socodka dhismuhu wuxuu ka bilaabmaa lineka baabuurta ee Eyup-Pierre Loti-Miniaturk
Turkey-China Railway Iskaashiga Heshiiska Bill mariyey Baarlamaanka
2016 laga yaabaa in
Wasiirka Arimaha Gudaha: "Cabbirka Bannaanbannadeenu wuxuu ka sarreeyaa 17,5 Milyan Dollar"
Topbas wuxuu siiyey sawir Maalgashiga Istanbul oo buuxa 35 Milyan Dollar
Lacagta 21.5 ayaa loo isticmaali doonaa maalgashiyada tareenka ee Istanbul
Maalgashiga gaadiidka ee Istanbul ayaa ka sarreeya lacagaha xawaaladaha ee 90